कतै तपाइलाई यी लक्ष्यण त छैनन् ? ‘यि संकेतले तपाईमा मुटु रोग छ भन्ने देखाउँछ’::kamananews
कतै तपाइलाई यी लक्ष्यण त छैनन् ? ‘यि संकेतले तपाईमा मुटु रोग छ भन्ने देखाउँछ’
खासगरी मुटु रोग तीन प्रकारका हुन्छन् । बच्चा, वयष्क र प्रौड एवं पाको व्यक्तिलाई लाग्ने ।
पछिल्लो समय मुटु रोगको समस्या बोकेर बसेका युवाको संख्या पनि निकै ठूलो छ । २५ बर्षभन्दा कम उमेरका तन्नेरी समेत मुटु रोगको जोखिममा छन् । कतिपय उपचार गराइरहेका छन् । कति जटिल शल्यक्रियाको अवस्थामा गुजि्ररहेका छन् ।
यसको अर्थ के भने, मुटु रोग भन्नसाथ कुनै उमेर समूहमा लाग्ने होइन । बुढापाकालाई मात्र मुटु रोग लाग्छ भन्ने होइन । नवजवानलाई पनि यो रोगले गलाउन सक्छ ।
आफुलाई मुटु रोग छ कि ? यो प्रश्नको उत्तर दिन हाम्रो शारीरिक अवस्था नियाल्नुपर्छ । मुटु रोग लागेको अवस्थामा मुटुको देव्रे भाग दुख्ने गर्छ । त्यसपछि यो दुखाई सरेर देव्रे च्यापुसम्म पुग्छ ।
मुटुमा समस्या भएकालाई सामान्य काम गर्न पनि गाह्रो हुन थाल्छ । गह्रौ काम गर्दा दुखाईको मात्रा बढेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा हिँडडुल गर्न पनि गाह्रो हुने गर्छ ।
पहिले तीन तला सिंढी चढ्दा पनि केही नहुनेलाई एक तला पार गर्न गाह्रो पर्छ भने उसलाई कुनै न कुनै खालको मुटु रोग लागेको हुन सक्छ । मुटुको समस्या भएका मानिसलाई सामान्य काम गर्दा पनि अत्याधिक थकाईको अनुभुति हुन्छ ।
हृदयघात हुनुभन्दाअघि छातीमा सहन नसक्ने पीडा हुन्छ । यसका साथै पेटको माथिल्लो भाग दुख्ने, अत्याधिक पसिना बग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुन जस्ता समस्या हुन्छन् । यस्तो समस्या भएमा तत्काल चिकित्सककहाँ जानुको विकल्प हुँदैन । अलिकति पनि ढिलो भयो भने ज्यानै जाने खतरा हुन्छ ।
युवाअवस्थामा मुटुको भल्व विग्रने समस्या पनि हुन्छ । जसलाई मेडिकल भाषमा रेम्याटिजम डिजिज भन्ने गरिन्छ । बाथ, ज्वरोको समस्याले यस्तो डिजिज हुन्छ । र, विस्तारै भल्व नै ड्यामेज हुन जान्छ ।
यस्तो अवस्थामा मुटु ढुकढुकी तीब्र गतिमा बढेको अनुभुति हुन्छ । छातीमा हात राख्न यसको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । छाती भारी भएर आउने, खुट्टा सुन्निने पनि समस्या हुन्छ । कसैकसैको पेट पनि फुलेर आउने गर्छ ।
मुटुको समस्या भएका मानिसको श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या देखिन्छ । छिट्छिटो स्वास फुलेर आउछ भने मुटु रोग लागेको हुन सक्छ ।
कतिपयमा बंशाणुगत मुटु रोगको समस्या पनि हुन सक्छ । गर्भबाटै मुटुको समस्या बोकेर आएका बच्चाहरुको शारिरिक बृत्ती विकासमा समस्या हुने, हात खुट्टा वा पुरै शरीर पहेंलिएर जानेजस्ता समस्या देखिन्छन् । बंशाणुगत समस्याको कारण मुटु रोग भएमा बच्चाका तौल पनि नबढ्ने समस्या हुन्छ ।
खासगरी शरीरको तौल, सुगर, कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई सन्तुलनमा नराख्दा जुनसुकै उमेरका मानिसलमा पनि मुटु रोगको अत्याधिक सम्भावना हुन्छ ।
अत्याधिक धुम्रपान, खैनी सेवन गर्ने मुटु रोगको उच्च जोखिममा हुन्छन् । विभिन्न अनुसन्धानले नै भनेको छ की अत्याधिक धुम्रपान सेवन गर्नेहरु ५० वर्षभन्दा कम उमेरबाटै मुटु रोगको शिकार हुने गर्छन् ।
सप्तरीमा एक महिलाको कपाल मुन्डन गर्ने तीन जनालालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही खड्ग नगरपालिका-१ सिस्वा बेल्हीका ५२ वर्षीय रुपनारायण राम, ३५ वर्षीय अहिल्या राम र २० वर्षीय सुनिल राम छन्...
यी कुरा खुवाउनु होस् आफ्ना बच्चालाइ
बच्चाको स्वास्थ्य सँधै बाबुआमाका लागि चासो र चिन्ताको विषय हुन्छ । आफ्ना बच्चाहरुले सानोतिनो रोग लाग्दा पनि उनीहरु अतालिन्छन् । तर, बच्चाहरुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने चाहिँ धेरै बाबुआमालाई जानकारी छैन । उनीहरु बिरामी भएपछि...
आज गाँसिने, भोली टुट्ने,कस्तो हाउडे प्रेम
अहिलेका युवा-युवती ‘फास्ट फुड कल्चर’ मा हुर्किरहेका छन् । उनीहरुलाई हरेक चीज जाँडो चाहिन्छ । किशोरावस्थामै प्रेममा पर्छन् उनीहरु । तर यस्तो हाउडे प्रेम धेरै समय टिक्दैन । आज हेराहेर, भोली प्रेम र पर्सी ब्रेकअप...
कागतीका बेफाइदा के के छन् ?
कागती बहुउपयोगी फल हो । यसको सेवन स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिनुका साथै सौन्दर्यमा पनि यसको उपयोगिता उत्तिकै छ । पानीमा कागतीको रस निचोरेर पिउनाले शरीरलाई भिटामिन सी, पोटासियम र फाइबर मिल्छ । तर, यसको...
जोन्सन एन्ड जोन्सनका बालबालिका लक्षित उत्पादनहरू नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय छन् । जसमध्ये एक हो, बेबी पाउडर । तर, हालैको एउटा भारतीय अनलाइनले भने यो बेबी पाउडरमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । जोन्सन एन्ड जोन्सनको...
‘ब्लू जोन्स’ का लेखक डान ब्यूटनरले संसारका ती पाँच स्थानको अध्ययन गरे जहाँका मानिसहरु लामो जीवन बाँचेका कारण चर्चित छन् । ती हुन् – जापानको ओकिनावा, कोस्टा रिकाको निकोया, ग्रिसको इकारिया, क्यालिफोर्नियाको लोमा लिन्डा र...
जवानीमै कपाल फुल्यो ? कसरि गर्ने समाधान ?
कपाल फुल्नु एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । सामान्यतया यसले उम्मेर छिप्पिन थालेको संकेत गर्छ । तर, आजकाल कम उमेरमै धेरै मानिसहरुका कपाल सेताम्य हुन थालेका छन् । खासगरी गुणस्तरहीन स्याम्पु र सौन्दर्यका साधनको प्रयोगले समयभन्दा...
यस्ता समस्या भएको बेला यौन सम्पर्क गर्न नहुने;
लगातार यौनाङ्ग आगोले पोलेजस्तो जलन वा दुखाई हुन्छ, पिसाब पोल्ने र बारम्बार पिसाब गर्न जानुपर्छ भने यसले संकेत गर्छ पिसाबनलीमा संक्रमण अर्थात युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन (युटिआई)को समस्या भएको छ । नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थका अनुसार...
किन जन्माउने बच्चा?यी हुन् कारण
प्रत्येक दम्पत्तिको जीवनमा सन्तानको विशेष महत्व हुन्छ । त्यसैले त सन्तान नजन्मिएसम्म परिवार पूरा भएको मानिदैन । तर, बिहेपछि कतिपय पति-पत्नी बच्चा जन्माउने कुरालाई लिएर चिन्तित हुन्छन् । बच्चाको आगमनसँगै उनीहरुको स्वच्छन्दता हरण हुन्छ र...
रुद्राक्ष र स्वास्थ्यको कनेक्सन,किन गरिन्छ रुद्राक्षको प्रयोग ?
रुद्राक्ष, जो चित्रहरुमा देवीदेवता एवं ऋषिमुनीहरुले पहिरिएको देखिन्छ । पाखुरामा, नाडीमा, गलामा रुद्राक्ष लगाएको पाइन्छ । अहिले पनि रुद्राक्ष धारण गर्ने सिलसिला जारी छ । रुद्राक्ष खेती गर्नेदेखि व्यवसाय गर्नेसम्म छन् । खासगरी मठ-मन्दिरमा,...